Uber dia nanome baiko ny hampiatoana ny asany any Slovakia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Slovakia » Uber dia nanome baiko ny hampiatoana ny asany any Slovakia
Ny tribonaly Slovak dia nandidy an'i Uber hampiato ny asany ao amin'ny firenena, hamaly ny hetsika nataon'ny mpamily fiarakaretsaka izay nilaza fa ny fifaninanana tsy dia mendrika.
Nanan-kery io fanapahan-kevitra io tamin'ny 6 martsa, saingy tamin'ny talata ihany no nanambarana izany ary mbola misy ny serivisy Uber any Bratislava renivohitra Slovakia.
"Voampanga ny voampanga mba tsy hamela ny olona izay tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny lalàna… hanatanteraka serivisy amin'ny taxi ao Slovakia," hoy ny mpitondra tenin'ny fitsarana Pavol Adamciak, ny talata teo.
Ny fikambanan'ny mpamily taxi voamarina no nametraka izany tamin'ny Janoary. Nanamafy izy fa ny mpamily Uber dia tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ireo mpamily fiarakaretsaka matihanina, ary ny fiara dia tsy mahafeno ny fepetra fiarovana sy fiarovana ho an'ny serivisy fitaterana matihanina.
Niatrika fihemorana ara-dalàna sy ara-dalàna eran'izao tontolo izao i Uber tao anatin'ny fanoherana ny serivisy taxi mahazatra.
EasyJet dia nanao sonia ny fifanarahana Fikojakojana maminany Skywise miaraka amin'ny Airbus